Wasiir Bayle oo Shuruud ku xidhay In la Bixiyo Lacagtii Loogu deeqay Afgooye | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Wasiir Bayle oo Shuruud ku xidhay In la Bixiyo Lacagtii Loogu deeqay Afgooye
Aug 4, 2020 - 17 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa shuruud ku xiray bixinta lacag loogu tala galay gurmadka Fatahaada degmada Afgooye oo todobaadyo ka hor ugu deeqday Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in lacagaas oo gaareysa Nu million dollar Mareykanka aysan bixin doonin haddii aan la helin hannaan cad oo looga hortagi karo in lacagtaas la musuq maasuqin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in loo baahan yahay Guddiyo ka shaqeeya arrimaha gargaarka degmada Afgooye iyo Maamulka Koofur Galbeed, si loogu wareejiyo lacagtaas.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ayaa eedeyn u soo jeediyay Wasiir Beyle, gaar ahaa Xildhibaan Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in Wasiirku ku fashilmay bixinta lacagta gargaarka degmada Afgooye, maadaama dadkii ku barakacay fatahaada ay u baahan yihiin.
Kumanaan qoysas ayaa ku barakacay fatahaada degmada Afgooye, kaddib markii wabiga shabelle uu ku soo fatahay xaafado ka tirsan degmada Afgooye.
Wasiirkani maxaa ka si ah?
Shay ayuu Fuckinstreet iyo Garoowe lacagta u diraa bilaa shuruud.Maxaa keenay inuu Reer Baydhabo sidan ula hadlo?
Ma Lafta -qareen ayaa kula taliyay,mise Formaajo ayaa kula taliyay?
Kolay,waxaan ogahay in meelahaasi aan kor ku sheegay lacagta toos loogu diro.
Inuu iska aamuso ayaaa qumanyd – saa meelihii kaleba lacagta wuu u dirijiray bilaa hadal.
Hadal malaayacni ah oo layska yidhaa waa in laga waantoobaa.Hadaad wax xisaabinayo dadka wada xisaabi.Adiga oo shalay lacagta aamus ku dirayay inaad maanta wax kale noo sheegto maan fahmin waxa aad uga jeedo.
Hadii uu isbadal dhacay,waa inaad hadalkaaga raacisaa isbadalka dhacay iyo arimaha soo kordhay si ay dadku kuu fahmaan.
Maaha inaad sida Daayerka iska hadasho.
Raysal Wasaarihii hore Khayre maalintii uu Wasiir Beyle ku amray in si deg deg ah uu u gaarsiiyo half a millions Dollars dadka reer Afgoye ee dhibaatada kasoo gaadhay fatahaada Wabiga mudadaa waxaa haatan laga joogaa 21 casho !!!
Waxaa wax lala yaaba ah markii la waydiiyey sababtoo uu ilaa iyo waqtigaa dheer ay qaadatay walina aan la gaarsiin lacagtaa reer Afgooye fatahaada dadkii ay wax yeeladu kasoo gaadhay wuxuu ku jawaabay:- “ waxaan ka baqayaa in lacagtaa la musuqmaasuqo “. Bal Ilaah baan idinku dhaarshaye arinkaa ka warama?
Balan waxaa inoo ah Feb 07 midnight………..
Waaba nasoo kareen!!!
Cayda jooji umad dhan baad fucking street ku sheegaysaa cuqdad baa ku haysa inaad cawaan tahay hoostaadii baa u raysa markaasaad baydhabo oon kuoqoon uhanqal taagaysaa adeer waa kuwii ku edbiyay kuwaad fucking street ku sheegaysaa inaan kuu jawaabo may ahayn ilayn dabeer aan korsanahaa tahee xabajo kawaran awdal yaa kugu maamula ilmagumeed laangaaba
Haa waa sidaad u dhigtay.
Dadkii lacagta loo qorsheeyay waa dhibaatonayaan.
Wasiirku waa in uu lacagta bixiyaa. Ama waa in uu sheegaa. Sababta dhabta ah een loo bixin Karin.
Dhaqanka somalida ayaa ah. Dadka laga boqo ama qabyaaladda ku qaraabto. in wexey donaan loo sameeyo. Dadka sabarka badana laga soo qaado. Dad aan saameyn laheyn.
Dadka reer afgooye wexey ka mid yihiin dadka dhiibo canshuurta Mr beyle xisaabiyo.
Wasiirku kuwii uusan hantidooda xisaabin Karin 24 saac ka yar ayuu ku siiyay. Wexey u baahnayeen.
Aniga ka garqaad ahaan waa sababta aan u aaminsanahay. Xumaanta qabyaaladda iyo wax iska dhiciska in ay bartaan dadka kasoo jeedo. Banaadir iyo 2 shabeelle. Ileen deganaan iyo xushmad waa wexey ku wayeen wixii ay xaqqa u lahayeen.
War ileen laysma barto.
waa Daayeernimo iyo Nacasnimo wayn in dadka la maqashiiyo hadal noocaasi ah.Waxa noocan ah maaha wax ay maqlikaraan dadka somaliyeed ee xaqa u hiiliya.
Inuu iska aamuso ayaa la qaadanlahaa oo qof kale hadlo.Isagii lacagta Garoowe iyo ta la siiyo maamulka Fuckingstreet ayaa maanta wax kale noogu sheekaynaya.Su’aashu waxa weeyi,yaad u dhiibi jirtay lacagihii hore ee aad u dirtay meelaha kale?
Su’aashaasi waa in ka jawaabaa Oday Bayle.
Dadkaasi waa in waxooda loo geeyaa oo wax lana tusaa.
Dayeernimada intaa leeg ee xadka dhaafay waa in loo dhigaa meeel oo lagula xisaabtamaa kuwan dawlada sheegta Nabad iyo Nolol.
sabobtaa waa in la cadeeyaa.
Kolay waan gaadhsiinayaa ciyaalka ka qayliya social Mediyaha arintaasi.
waa inay ku baashaalaan.
bal aduu isa sax.Anuu Ummad ma caayin e waxan idhi,ama aan ka hadlaa,maamul.
Maamulkaasi waxaa ku jira Adeerkay iyo Tolkay oo badan.
Maamulka Hargeisa,waxaa looga jeeda kuwa dawlada sheegta ee meesha dadka ku dhaca.
Waa Naanaynsta Hargeisa, Fuckingstreet.
Magaalo kasta oo aduunka ku taalaa waxay leedahay naanays.
Markaa saxiiboow,wax iska hubso.
Abti horta hadaan abtiyaday wax u dhimay xaal baan ka bixiyay lakiin kelmada fucking street macnayso maamulkaad sheegayso waad ka soo horjeesan kartaa anigaygan kula hadlaayo ma taageersani lakiin waxaan diidanahay qabiil dhan oo wax walba leh ka dagtid sharmuutooyin ceeb abti wax isula har abti abtixume ha noqonine
Saxiib anigu qabiil a caayin – aan kuugu celiyo.Hadaad somaliland iSaaaq u taqaano adaa iska daali doona lol
Somaliland,Waa dhulka waqooyiga somaliya.
Kala saar Isaaq iyo maamulka Hargeisa ee ay ku midaysanyihiin dadka danaha wadaaga ee ka soo jeeda waqooyiga somaliya.Tuugta ku midaysan hogaaminta qabiilada si dhaqaale looga sameeyo.
Magaasina waa Naanaysta Hargeisa loo yaqaano.
Haday ku dhibto,adiga ayay kuu taalaa.
Aniga waxba ha ii sheegin.
Jaamac shabeel oo inoo sharaxaya xeerkii Islamicga ahaa oo magu badalay xeerka Gay-ga ee ka jira Yurub.
MAANTANA, Waxaad Socotaan ood Socotaanba MA WAXAA idinka faka-là C.D. BAYLE?, WAR-MOOGE-yaalow! WADDANKANI wuxuu saaranyahay Dhabarka Bayle/Oomaar iyo INYAR oo wehlisa, Waxaana ILAAHEEN SWT Mahadiya iney jiraan inyar oo Wasiira oo Raadkooda ku taagan.≈©≈ABAAL-laawe-yaal isku xishooda, Bayle Waa Maalqabeen DAACAD u ah Waddankiisa ooy u-muuqato halkuu reerka u rarilahaa, Bayle/Oomaar ALLAHA idin dhowro. ≈©≈WAR bal gadaal u fiiriya, 3sano ka hor halku Waddanku joogay?, Airoboor ma jiray?, Somali-airlayn majirtay? HADDUU Oomaar intaa qabtay YAA bixinaay Dhaqaalaha?.≈©≈War ILAAHEEN SWT ku mahadiya inuu Daljireyaashaa Nool idinka dhaliyay. ≈©≈DAAYA Bayle, isagaa yaqaan oo idinka OG halkuu Beesha u rariye. ≈©≈Anigu waxaan leeyahay; “ILAAHOW ADAA Mahadle oo naga dhaliyay DALJIRE-YAASHAA. WBT
Dadkii deganaan jiray xaafaha aad hargaysa ugu magac dartay waxay sheegeen in aanay waligeed ka soo bixin Inan reer sheekh isaxaaq ayna ahaayeen reer boorama iyo anas guul dad reer itoobiya Ah oo qabaa illa yaryar Ah marbaa looga shakiiyay in ay ku jirto Inan reer hargaysa Ah tiina waa laga soo waayay markii rak midiyo ku hubaysan weerara ku qaadeen sababtoo kumay badbaadeen reerka ay inani halkaa ka gashaa dhulkaba muujoogeen shaahna meelkamay cabeen dhagaxbaa lagu laynlahaa haday hal xabo oo reerkaasi Ah lagu sheego daris baanu hadaadan nahay reer haafadaa kuri kulahaa oo hablihii halkaa kasoo bixijiray arki jiray dadkii halkaa ku jiray way oyaqaaneen in aanay hal maalin nabad ku joogeen haday ka kamid ahaan lahayd Inan reerkaasi Ah Markaa ninyo xishoo dadkii meeshu ufurayd adoo Ah Iska ka dhigin min ka fok
Kkkkk ayaan taan aad baad ukacsan tahay.nabad iyo nolol qofkaan iska dhicin waa ku digtaan
Qoraal kale kusoo celi si.aan u fahano. U jeedka hadalkaaga
Jana ka iloobin.
reer afgoye ayaa ba ay hadii daanyer kii guda beersay ee tahriibka ku yimid muqdisho uu shurud ku xirayo kistodi aaway eelaay laftagaren qashinba qashinka kale ka urbadan baan maqli jirey oday dalxa yaabay
Wiilxaare aka cadaado aka hobyo godan adiga xagee ku xanuuneysa oo aad ka jiifaasan la’dahay maxaa kaa quseeya hawsha socota maxaad ku ceyday wasiir beyle?maxaadse ku ceydey lafta gareen? Mise waad cabsan tahay sidii caadada kuu aheyd war meel fariiso uskagyahay waxba ma ogide hawlahaan socda dhoocil ka ahaw oo dhidhibso.mayla socotaa dulliyahaw.
buuryaqab adiga weli jawaabti baan kaga fadhiya ee hadii aad soo wareysatay cariga maamlihi aad maqneyd maxad war soo heshay maxa lagu soo yidhi
buuryaqab hadii aad ilowdey su aashi aan kugu celiye berigi 1993 caydid qabsaday gobolka gedo ciidamadii caydid waa wada kufsaden oo wada fuulen ilkayar oo xita kuwii midgaha ahaa sida uurmidig iyo feer bidix iyo soonfure iyo howrarsame iskada ilkayar tii kale marka ma waxad tahay kuwii moorayan tii caydid qasabka uga dhalen habrihi ey kusaden berigas koley garad kagu xiligas buu ku beegan yahaye ???????????